Where to find the Best color vision Test? - Iris က💡💻 - မျက်လုံးကာကွယ်မှုများအတွက် software ကို, ကျန်းမာရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား🛌👀
Farnsworth-Munsell 100 Hue စမ်းသပ်ခြင်း
အီရှီဟာရာ 38 ဟင်းပွဲစမ်းသပ်ခြင်း
ဤသည်ကိုစမ်းသပ်အကျော်ကြားဆုံးအရောင်ရူပါရုံကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒါဟာအပေါ်အခြေခံသည် 88 ရောင်စုံပြား.
အများအားဖြင့်, စမ်းသပ်မှုလူတစ်ဦးမှလေးသုတ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ် 22 ရောနှောအရောင်ပြား.
အဆိုပါအီရှီဟာရာ 38 လေ့ Ishihara ပြားအဖြစ်လူသိများသောပန်းကန်စမ်းသပ်ဒေါက်တာနေဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်. တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအချိန်အကြာဂျပန်ကနေ Shinobu Ishihara.
အဆိုပါ Ishihara ပန်းကန်စမ်းသပ်ပါဝင်ပါသည် 38 ကွဲပြားခြားနားသော pseudoisochromatic ပြား.
အဆိုပါ RGB Anomaloscope အနီရောင်အစိမ်းရောင်အရောင်ချို့တဲ့ရောဂါဖို့အသုံးပြုတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်.
ဒီစမ်းသပ်မှုထဲမှာ, လူတစ်ဦးရိုးရှင်းစွာကွန်တိန်နာအောက်က slider ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လက်ျာတစျခုမှလက်ဝဲအရောင်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်.
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူတို့ကိုအတော်ကြာကိုက်ညီနိုင်လျှင်သူတို့ကကျိန်းသေအနီရောင်အစိမ်းရောင် colorblind ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ်.
အရောင်အစီအစဉ်စမ်းသပ်မှု colorblindness ၏ချို့တဲ့ခြင်းအထဲကရှာတွေ့မှကောက်ယူစမ်းသပ်မှု၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်.
ဒီစမ်းသပ်မှုထဲမှာ, the person simply needs to arrange all the given colors in the correct order of colors.
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအရောင်ကန်းအချို့ကိုကြင်နာခံစားနေရပြီးလျှင်ကိစ္စတွင်, ထို့နောက်သူ / သူမစံအရောင်ရူပါရုံကိုအတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှနှိုင်းယှဉ်ပါကအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်းစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျ colorblind သို့မဟုတ်မမျှော်မှန်းချက်နှင့်အတူရှိမရှိသင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ အရောင်ကန်းစမ်းသပ်.